४० कटेसी गाँसेको प्रेम ‘न्यू इयर’ मा यसरी निभ्यो ! - Nayabulanda.com
४० कटेसी गाँसेको प्रेम ‘न्यू इयर’ मा यसरी निभ्यो !
नयाँ बुलन्द ३ बैशाख २०७६, मंगलवार १९:४७ 251 पटक हेरिएको
काठमाडौं : विशालनगर, काठमाडौंकी ४० वर्षीया सुनिता (नाम परिवर्तन) एक दशकदेखि रोजगारीका क्रममा इजरायलमा थिइन् । छोराछोरीलाई राम्रो पढाउने र केही रकम जोहो गर्ने सपना बोकेर उनी श्रीमानसँग सल्लाह गरेरै त्यहाँ पुगेकी थिइन् ।
प्रारम्भिक जाँच मुचुल्का तयार पारेर प्रहरी फर्किँदासम्म सुनिता निन्द्रामै थिइन् । अनुसन्धान अधिकारीले भने छानविन गर्ने क्रममा शव भेटिएको आसपासका व्यक्तिलाई मृतक व्यक्तिको तस्वीर देखाएर सोधपुछ गर्न थाल्यो । तर, उनलाई चिन्ने कोही भेटिएनन् ।
अनसुन्धानका क्रममा प्रहरीले सुनिता र उनका श्रीमानसँग लिएको वयानबाट भने मदिरामा लठ्ठ मीनप्रसाद श्रेष्ठ फोन नउठेपछि त्यहाँ आएको हुन सक्ने देखिएको छ । ‘गेटबाट छिर्नेवित्तिकै फलामको गोलो भयाङबाट उनीमाथि चढेकोजस्तो देखिन्छ’, एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सुनिताका श्रीमान चोर आएको हो कि भन्दै बाहिर निस्किएका बेला देख्ने डरले मीनप्रसाद छततिर गएका हुन सक्छन् ।’
मीनप्रसाद राति नशाको सुरमा आफैं नै सुनिताको घरमा पुगेको मान्ने हो भने उनी यसअघि पनि त्यो घरको पुगेको हुनुपर्ने स्पष्ट हुन्छ । नत्र, नशामा डुबेको मानिस त्यहाँ पुग्न सक्दैन ।
‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै विस्तृत कुरा खुल्नेछ’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई सुनिताले दिएको वयान अनुसार मृतक श्रेष्ठले गत माघमा मात्रै विवाह गरेका थिए । बिहे गरेपछि सुनिताले ‘पहिले जे भयो भयो, अब हामी सम्पर्कमा नरहुँ’ पनि भनेकी थिइन् । तर, न्यू इयर इभमा रमाइलो गर्न भेट्दा सुनिताको विवाहेत्तर प्रेम सम्बन्ध मात्रै खुलेन, उनले आफूसँगै श्रीमानलाई पनि प्रहरी हिरासतमा पुर्‍याइन् ।
आखिर सुनितामा त्यस्तो के थियो, जसले नवविवाहित मीनप्रसादलाई मन्थलीबाट तानेर ठमेलसम्म लाइपुर्‍यायो ? अनि, त्यहाँबाट तानेर केले राति नै सुनिताको घरैसम्म पुर्‍यायो ? आखिर मानिस किन यत्ति साह्रो क्रेजी हुन्छ ? यसको विश्लेषण गर्ने जिम्मा चाहिँ समाजशास्त्री एवं यौन मनोविज्ञहरुलाई दिनुपर्ला कि ?